मिस नेपालको निजी कुराः पहिरनमा हुरुक्कै, खानपानमा ‘नो इन्ट्रेस्ट’!!! | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
मिस नेपालको निजी कुराः पहिरनमा हुरुक्कै, खानपानमा ‘नो इन्ट्रेस्ट’!!!
स्वास्थ्य, सौन्दर्य र तन्दुरुस्तीका के गर्छिन्, कस्तो खान्छिन् ? कति खान्छिन् ? यसको रेडिमेड जवाफ थिएन, निकिता चन्दकसँग । उनी केही क्षण घोत्लिइन् । ‘अँ, यसबारे त सोचेकै थिइनँ’ ब्राउन कलरको वान पिसमा ठाँटिएकी निकिताले भनिन्, ‘नर्मल नै हो । खास त्यस्तो छैन ।’
अर्थात्, उनले सुडौल शरीरका निम्ति डाइटिङ गरेकी छैनन्, जिम धाएकी पनि छैनन् । न उनलाई मेकअपमा लगाव छ, न त गरगहनामा नै । स्पा जाने, पार्लर धाउने, मर्निङ वाक गर्ने, खानपानमा कटौती गर्ने केही पनि छैन, उनको दैनिक मेनुमा ।
सुत्ने र उठ्ने तालिका नियमित छैन । यद्यपि ६ वा ७ घण्टा भने मस्त निदाउँछिन् । ओछ्यानमा पल्टिएपछि संगीत सुन्छिन् । र, निदाइहाल्छिन् । बिहान ६ बजेतिर उनको निन्द्रा खुल्छ ।
‘मेरो टाइम मिलेको छैन’ निकिता भन्छिन्, ‘उठ्नमा अलि ढीला भइरहेको छ ।’
भेजिटेरियन खान्कीमा स्वाद
उनको जिब्रो ‘हेल्दी डाइट’ मा अभ्यस्त छ । उनी भेजिटेरियन हुन् । सागपात खान्छिन् ।
फलफूल औधी रुचाउँछिन् । जुस देख्नासाथ मुख रसाउँछ । चिप्लो, मसलेदार, घरबाहिरको खान्कीमा स्वाद भिजेको छैन । घरमा जे पाक्छ, त्यसमै सन्तोष मान्छिन् ।
अक्सर उनको भान्सामा रोटी, दाल र सब्जी पाक्छ । बस्, यतिले उनको मन अघाउँछ । भोक लागेको बेला निकिताको दिमागमा कस्तो खानेकुरा आउँदो हो ? कुन खाने कुरा सम्झँदा मुखमा पानी आउँछ ?
निकिताले थोरै नाक खुम्च्याएर यस्तो जवाफ दिइन्, ‘पर्टिकुलर यही भन्ने छैन । नर्मल्ली भेजिटेरियन भनेपछि पनिर, टोफु यस्तै–यस्तै भन्ने गरिन्छ । तर, मलाई डेरी आइटम पनि मन पर्दैन ।’
उनी दिनमा चार पटक खान्छिन् । बिहान ९ बजेतिर ब्रेकफास्ट । ब्रेकफास्टमा कहिले ओट मिल र केरा हुन्छ । कहिले चिउराको पोआ । यससँगै उनी पर्याप्त पानी पिउँछिन्, दिनभरमा करिब चार लिटर । मध्यन्ह १ बजेतिर खाना खान्छिन् ।
खानामा रोटी, दाल र सब्जी भए पुग्छ । साँझमा थोरै स्न्याक्स लिने गरेकी छिन् । घडीको सुईले आठ बजेको संकेत गरेपछि रातको खाना खाने समय हुन्छ । त्यसबेला पनि उनको टेबुलमा दाल, रोटी हुन्छ ।
‘जंकफूड रुच्दैन’ निकिता भन्छिन्, ‘आफ्नै भान्सामा पाकेको खानेकुरा मनपर्छ ।’
खानपानमा उस्तो आशक्ति छैन, निकितालाई । र, भान्साको काममा पनि । उनलाई कुनै खानेकुरा बनाउन जाँगर चल्दैन । ‘मेरो दिदीलाई भने खानेकुरा बनाउन खुब मनपर्छ’ निकिता भन्छिन्, ‘हामी राजस्थानमा छँदा दिदीले खानेकुरा पकाउने, म चाहि सरसफाई र अरु काम गर्ने ।’
पहिला उनी जिम गर्थिन् । मर्निङवाकमा पनि निस्किने बानी थियो ।
तर, अहिले मर्निङवाक छुटेको छ । बिहान उठेपछि व्यायाम गर्थिन् । त्यो पनि छुटेको छ । योग गरेकी छैनन् । तर, ‘योग गर्नैपर्छ’ भन्ने लाग्छ । ध्यानको अभ्यास पनि गरेकी छैनन्, जो गर्नैपर्छ भन्ने लाग्छ ।
‘मिस नेपालका केहि सहभागी साथीहरु ध्यान बस्ने गरेका रहेछन्’ निकिताले भनिन्, ‘तर, यो निकै जटिल कुरा हो ।’ ध्यान बस्नका लागि मनलाई एकाग्र हुनुपर्छ । उनलाई यस्तो अभ्यास अलि गाह्रो लाग्ने रहेछ ।
जब एक्लै नाँच्न थालिन्
निकिताले एउटा रमाइलो प्रसंग सम्झिइन्, ‘मर्निङवाकले मलाई धेरै राम्रो गर्‍यो । तर, त्यसलाई रेगुलर गर्न सकिनँ ।’
त्यसबेला निकितालाई ‘फ्रस्टेशन’ भएको रहेछ । ‘म फस्ट्रेशनको फेजमा थिएँ र त्यसबाट कसरी उम्कने भनेर सोचिरहेकी थिएँ ।’ मर्निङवाक एउटा वाहाना भयो । उनी मर्निङवाक गर्दै उनी खुला स्थानमा पुगिन् । कानमा इयरफोन घुसारेकी थिइन्, मोवाइलमा गीत बजिरहेको थियो । त्यसैको तालमा उन्मुक्त नाच्न थालिन् । अरुले के ठाने ? न गीत बजेको छ, न नाच्ने माहौल नै छ । बिहानै मस्त युवती अन्धाधुन्ध नाचेको देखेर सबै छक्क परे ।
तर, निकितालाई वाल मतलब । मनको उदासिनता जो भगाउनु थियो ।
‘यसले मलाई साँच्चै राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्‍यो ’ निकिता भन्छिन्, ‘मैले पोजेटिभ कुरा मात्र सम्झन थालें । मनमा बेग्लै उत्साह भरिएर आयो ।’ उदासिनता हरायो ।
निकिता ‘व्युटी कन्सस’ छिन्, तर अनुहारमा लिपपोत गर्ने कुरामा उस्तो रुची राख्दिनन् । उनलाई मेकअप गर्न जाँगर चल्दैन । बाहिर हिँडडुल गर्नुअघि सामान्य आइब्रो मिलाउने, लिपस्टिक लगाउने गर्छिन् । यति भएपछि पुग्छ । गर–गहनामा पनि खास आशक्ति छैन । उनले औंलामा लगाएको सानो औंठी देखाउँदै भनिन्, ‘यत्ति हो । अरु केही लगाउने गरेकी छैन ।’
सपिङ र पहिरनमा हुरुक्कै
पहिरनको प्रसंगमा निकिता निकै चुजी रहिछन् । ड्रेसअप गर्न, सपिङ जान पाउँदा मन औधी रमाउँछ । उनी दिदीसँगै सपिङ जान्छिन्, पहिरन छनौट गर्छिन् । आफुलाई सुहाउँदो पहिरन खरिद गर्छिन् । ‘लुगा महंगो हुनुपर्छ भन्ने छैन, आफुलाई जुन सुहाउँछ जस्तो लाग्छ त्यही किन्ने हो’ निकिता भन्छिन्, ‘लुगा किन्नुअघि ट्राई गरेर दिदीलाई देखाउँछु, किनभने आफुलाई कस्तो देखिएको छ भन्ने कुरा अरुले थाहा पाउने हो ।’
कुनै पहिरन किनेपछि त्यसलाई कस्तो एक्सेसरिजसँग कम्बिनेसन मिलाउने हो भन्ने कुरा ‘इम्याजिङ’ गर्छिन् । अक्सर उनलाई कालो एवं डार्क कलर मन पर्छ । जुत्ता, चप्पल कालो रंगको हुनुपर्छ । ‘कालो रंग जस्तोपनि लुगासँग फिट हुन्छ’ निकितालाई यस्तै लाग्छ ।
उनी घरबाट बाहिर निस्कनुअघि पहिरनको खास ख्याल गर्छिन् । ‘किनभने तपाई राम्रो देखिनुभएको छ भने तपाईको कन्फिडेन्स पनि बढ्छ’ निकिता भन्छिन् ।
उनी ब्रान्ड कन्सस छिन्, तर ब्रान्डको पछि लाग्दैनन् । आफुलाई जे सुहाउँछ, त्यही लगाउँछिन् । ‘मंहगो हुँदैमा सबैकुरा राम्रो देखिन्छ भन्ने छैन’ निकिता भन्छिन्, ‘सामन्य ड्रेसअप गर्नुहोस्, तर त्यो आफुलाई सुहाउने हुनुपर्छ ।’ – अन्लाईन खबर